N'ebe ndịda ọwụwa anyanwụ nke ụsọ oké osimiri New South Wales
Otutu mmadu na - ebido na mmanu di nkpa site na okwu ato: Tea Tree oil.
Melaleuca Alternifolia bụ obere osisi si Australia nke nwere ahịhịa dị ka ya na isi ya nke okooko osisi sessile odo ma ọ bụ ifuru. A na-enweta mmanụ site na akwụkwọ nke osisi ahụ, ma a na-emepụta ya na Australia dum.
Ala mmiri juju, sọtọ nke New South Wales na Australia na-eme ka ebe dị mma maka osisi tii iji topụta mmanụ na-esi ísì ụtọ.
Osisi tii dị na mpaghara a nwere ezigbo akụkọ ntolite mara mma, ebe ndị amaala obodo wulitere ma jiri ya kemgbe ọtụtụ puku afọ.
Agafee akụkọ edere, Tea Tree Mkpa Mbara Mbara mmanụ na abamuru nke ụmụ amaala Ọstrelia bufere ọgbọ ọzọ. Enwere nnukwu nghọta ojiji mmanụ ahụ mere ka ha bụrụ onye isi na ojiji ya taa. Taa, a na-anakọta mkpụrụ osisi tii site na otu usoro ahụ, na-aga n'ihu na akụkọ a na klas.
Tea Osisi Mkpa Tea nwere mmanụ ọhụrụ, nwere ọgwụ, na ọgwụ nje na-esi ísì ụtọ. O nwekwara ndenye ihe nlere anya dikwa ka mint.
Tea Tree Mkpa Mmanụ a na - ahụkarị bụ otu n'ime mmanụ mmanụ ama ama n'etiti ndị okenye na ụmụaka. Ugha dị nro, ọgwụ nje na obere ntakịrị na-eme mmanụ mmanụ maka ọtụtụ mmadụ. Anaghị egbu oge! Nye iwu Osisi Tea gị Nke Dị Mkpa na AromaEasy taa!
Mpaghara ugwu nke Australia na-enye ezigbo azụma mmiri na-adọrọ mmasị maka pine cypress Australia. Dabere na agbụrụ ọmụmụ nke ndị amaala obodo anyị, onye anyị na ya na-arụkọ ọrụ hụrụ ọnọdụ nka nwere ikikere iji aka gị mee ihe ọpụpụ. Mgbalị niile na-apụta na mmanụ mmanụ anyị pụrụ iche. A ka na-enyocha ọtụtụ abamuru ndị ọzọ nke mmanụ a.